N’Golo Kanté oo hal arin ugu baaqay taageerayaasha kooxda Chelsea kahor kulanka soo aadan ee Tottenham – Gool FM
N’Golo Kanté oo hal arin ugu baaqay taageerayaasha kooxda Chelsea kahor kulanka soo aadan ee Tottenham
(Caraboa Cup) 09 Jan 2019. Xidiga khadka dhexe kooxda Chelsea N’Golo Kanté ayaa ku booriyay taageerayaasha kooxda Blues oo dhan inay soo buux dhaafiyaan garoonka Stamford Bridge, si ay kaga caawiyaan inay u soo gudbaan finalka tartanka Carabao Cup.
Tottenham ayaa guul ay ku rafaaday ee 1-0 ah kaga badisay kooxda Chelsea lugta hore ee wareega afar dhammaadka tartanka Caraboa Cup.
Laakiin N’Golo Kanté ayaa aaminsan in ay kooxdiisa Chelsea kaga soo gudbi karto Tottenham kulanka finalka ee Caraboa Cup, kadib marka ay lugta labaad ku wada ciyaaraan garoonka Stamford Bridge xili dambe ee bishan Janaayo.
“Rigoorada waxay nagu abuurtay dhibaato badan, waxaan isku daynay inaan jawaab ka bixino, laakiin waan awoodi weynay inaan gool dhalino, taasina waxay sababtay natiijada ay ciyaarta ku dhamaatay”.
“Waxaan ciyaarnay kulan wacan, in badan ayaan kubada heysanay, tirakoobyadu ciyaarta waxay muujinayaan inaan u qalanay in aan natiijo wanaagsan helno, laakiin taasi ma aysan dhicin, waxaan u baahanahay inaan aqbalno arintaas, balse waxaan qabaa in natiijo fiican aan ku heli doono garoonkeena Stamford Bridge”.
“Waxaan fursad weyn ku heysanaa taageerayaasheena hortood, waxaan u baahanahay iyaga, waxaan heysanaa kulan aan ku gaari karno finalka, waxaana soo bandhigi doonaa wax walba ee awoodeenu gaarsiisan tahay”.
"Vincent Kompany waa hogaamiyaheena balse..." - Pep Guardiola
DEG-DEG: Xiriirka kubada cagta dalka Spain oo si rasmi ah u shaaciyay laacibkii ugu fiicnaa La Liga bishii December